बुढाथोकी मगर (देउराली गोत्र) को वंशावली पुख्र्यौली
Created on Tuesday, 17 October 2017 09:23
यम बहादुर बुढाथोकीमगर
हाल धौलागिरी बाग्लुङ्ग जिल्ला गल्कोट नगरपालिका कडबास बिर्कोटमा बसोबास गरेका बुढाथोकी मगर, सैनिक पेसाबाट अवकाश पछि पाल्पा जिल्ला बाट अवस्थामा भुवन सीं बुढाथोकी बाग्लुङ्ग बिर्कोटमा बसोबास गर्नु भयो । पाल्पा जिल्लामा बुढाथोकी मगर कहाँबाट आए र बसोबास गरे भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । सायद, रोल्पा, प्युठान र रुकुम तिर बुढा मगरहरुको बसोबास भएको हुँदा कतै पश्चिमबाट आएर पाल्पामा बसोबास गरेको हुनसक्छन् । यस पुस्तकमा विशेष गरेर स्व. भुवनसीं बुढाथोकी मगरको हाल बिर्कोटमा गाउँमा बसोबास गरेका उनका सन्तानको वंशावली, बुढाथोकी मगरले गरेका राष्ट्रको लागि योगदान र पारिवारिक विवरण प्रकाशन गर्नु रहेको छ ।
राष्ट्रको लागि योगदान
सन् १८१४ तिर नेपाल सरकारले, नेपालको पश्चिम सिमाना विस्तार गर्नको लागि, काङदा, नालापानि, देरादुनहरुमा नेपाली सेना पठायो । यी नेपाली सेनामा अधिकांश पश्चिमका मगरहरु थिए । त्यस सेनामा बुढाथोकी मगरहरुको सहभागिता थियो, भन्न हिच्काउन पर्दैन, किनभने त्यस समयमा युद्वमा प्रयोग हुने हात हतियार, भाला, खुडाँ र भरुवा बन्दुकहरु भुवनसीं बुढाथोकी मगर सित थियो र यद्यपि अहिले सम्म पनि छ ।
१८७२ साल ब्रिटिश ईष्ट ईन्डियन कम्पनी सरकारले रुपन्देही हुदै पाल्पा जिल्लातिर फौज पठाउने सुराकी पाए पछि बटौलीको तिनाउ खोलाको छेउमा किल्ला जमाएर कर्णेल उजिर सी. थापाको नेतृत्वमा म्भागकभ गढी जमाएर बसेको थियो । ईष्ट ईन्डियन कम्पनि सरकार (बेलायती) लाई अगाडी बढ्न नदिई उनिहरुलाई हराएको थियो । र यस गढीको नाम जितगढी रहन गएको छ । यस युद्धमा अधिकांश पाल्पाली मगर समुदायबाट युद्धमा सहभागी भएका थिए र दुस्मनलाई हराउन सकियो । बुढाथोकी मगर पनि यस युद्धमा अवस्य सामेल भएको हुनु पर्दछ ।
नेपाल र चिन बिच असमझदारीका कारणले दुई देशबिच लडाई हुनेभयो । नेपाल सरकारले पाल्पा गौदामा रहेका नेपाली सेनालाई ४००० पर्वतमा पठायो । यो ४००० पर्वतमा हालको जिल्ला बाग्लुङ्ग पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङ्ग पर्थे । भुवन सीं बुढाथोकी नेपाली सेनामा जागिरे भएको हुँदा उक्त लडाईमा भाग लिनको लागि जहान परिवार समेतलाई साथमा लिएर जानु भयो र चिन सितको मुस्ताङ्ग जिल्ला केरुङ्गको युद्धमा सहभागी हुनु भयो ।
भुवन सीं बुढाथोकी मगर पाल्पा जिल्लाको खानी गाउँमा जन्मनु भयो, हुर्किनु भयो र नेपाली सेनामा भर्ती हुनु भयो । धनुवाण चलाउन अनि सिपालु र निसाना बाज पनि हुनुहुन्थ्यो । वहाँ सित अन्य युद्धकला र बहादुरी पनि थियो । नेपाल र चिनको लडाई हुने समयमा पाल्पा जिल्लाबाट नेपाली सेना ४००० पर्वत जाने आदेश आयो, भुवन सीं बुढाथोकी पनि श्रीमति र दुई भाई छोरा सहित पाल्पा बाट जानु भयो । ४००० पर्वत पुगेको केही समय पछि वहाँको श्रीमतिको निधन भयो । स्थानिय महिलालाई आफ्नो दुई भाई छोराको जिम्मा लगाई लडाइँमा जानु भयो । चिन संगको लडाई समाप्त भएपछि फर्केर आउदा ती स्थानिय महिलाले दुई भाई छोरालाई राम्रो हेरचाह गरी पालन पोषण गरेको पाउनु भएछ । केही समय पछि सोही स्थानिय महिला संग विवाह गर्नु भएछ ।
नेपाली सेनाको सैनिक जीवन पछि, घर पाल्पा जिल्लामा फर्किनु पर्ने हो, तर सायद गैर मगर विवाह गर्नु भएकोले त्यस समयमा नवविवाहित श्रीमति लिएर पाल्पा जान सक्नु भएन । तसर्थ सैनिक अवकाश पछि गल्कोट गल्याङ्ग देखि उत्तर पट्टी घुम्टे लेखको नजिकमा बसोबास गर्नु भयो जसको नाम हाल सम्म मगर बसे भनी चिनिन्छ ।
मगर बसेको भौगोलिक अवस्था राम्रो थिएन । मगर बसेको वरीपरि सामाजिक अवस्था पनि, सबै ब्राह्मण (उपाध्य) मात्रको बसोबास गरेका थिए । मगर बसेदेखि लगभग २ घण्टा पैदल यात्रा गरेर पुग्न सकिने र मगरहरुको मात्र बसोबास भएको बिर्कोट गाउँ रहेछ । सायद नाता कुटम्बको साइनो जोडिएको हुनसक्छ । कति समय सम्म मगर बसेमा बुढाथोकी मगरहरु बसोबास गरे यकिन साथ भन्न सकिन्न । मगर बसेबाट भूवन सिंह बाजे, श्रीमति, दुई भाई छोरा पहल सीं र धन सीं सहित स-परिवार लिएर बिर्कोट गाउँमा आएर बसोबास गरेको आठौं पुस्ता भइसकेको छ । भुवन सिं पाल्पामा जन्मनु भयो, ४००० पर्वतमा अस्थाई रुपमा बसोबास, गल्याङ्ग माथी मगर बसेमा अस्थायी रुपमा बसी बिर्कोट गाउँमा बसाई सराई गरी स्थायी रुपमा बसोबास गर्नुभयो ।
बिर्कोट गाउँको अवस्था
बिर्कोट गाउँमा बुढाथोकी मगरहरु आउनु भन्दा पहिले, त्यस गाउँमा कुन कुन थरका मगरहरुको बसोबास गर्ने र अन्य समाज बारे जान्नु, थाहा पाउनु राम्रो होला । बिर्कोट गाउमा दर्लामी मगर र सलामी मगरहरु नै सबभन्दा पहिला बसोबास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनिहरुले नै बिर्कोट गाउको बारीलाई खेति योग्य र अमलावेदी फाँटलाई धान खेती योग्य बनाएको हुन् । उनिहरु व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्न थाले त्यस पछि अन्य थरका मगर र अन्य समाज आउने क्रमश बढ्दै गयो । दुर्लामी र सलामी मगरहरु पछी बुढाथोकी ( ) घैरेनी पाखामा, बुढाथोकी (देउराली) सलामी मगर र दर्लामी मगरहरुको बिचमा आएर बसोबास गरेको रहेछन् । त्यस पछि थापा (सिंजाली, तङ्गरामी मगर, गाहा मगर, पुन मगर र छन्त्याल मगरहरु आएर बसोबास गरेछन् । बिर्कोट गाऊँ देखि माथि थाले पोखरामा गलामी मगरहरु पनि बसोबास गरेका छन् । अन्य समाज बाट, कडेँल जैंसी पचुवाबाट, सापकोटा जैंसी रिख्भीबाट चालिसे चाल्से टोल र बिर्कोट अन्तर्गत काडेवासमा थकाली, चुरेटा साथै दलित थर समेत पछि आएर बसोबास गरे ।
बिर्कोट गाउँमा बसोबास गरेपछि गाउँको माथिल्लो भेगको जंगल फडानी गरेर खेती योग्य जमिन बनाएका रहेछन् । धन सिं का छोरा नातीहरु साधारण किसान काम गर्ने र रेउत बहादुर बुढाथोकी विदेशमा (वर्मा) जानु भएको थियो । पहल सिं का छोरा नातीहरु किसान काममा रहनु भयो । तर भैरव सीं का छोरा भक्तिराम ईष्ट इण्डियन आर्मीमा भर्ति भएर प्रथम विश्व युद्धमा लडाई लड्नु भयो र पेन्सन पकाउनु भयो । सैनिक जीवनमा लेखपढ गर्न पनि सिक्नु भएको रहेछ ।
बिर्कोट गाउँको लागि योगदान
भक्तिराम बुढाथोकी पेन्सन आउनु भन्दा पहिला गाउँको पुख्र्यौली र जिम्मावाल दुर्लामी मगरले चलाउनु भएको रहेछ । स्वयम् समयमा गल्कोट राज्य थियो र यसको राजा भरत वम मल्ल हुनुहुन्थ्यो । के कारणले हो ? कहिले ? दर्लामी मगरहरुबाट पुख्र्यौली र जिम्मवाल (विरौटे) भक्तिराम बुढाथोकीले पाउनु भयो । भक्तिराम बुढाथोकीले बिर्कोट गाउँको पुख्र्यौली प्राप्त गरेपछि गाउँको सिमाना मजबुद गराउने कार्य सुरु भयो । छिमेकी गाउँका मुखियाहरुले बिर्कोट गाउँको सिमाना मिच्ने कार्य गरेका रहेछन् । त्यसको लागि कानूनि प्रक्रिया द्वारा बिर्कोटको सिमाना यहाँबाट पर्छ भनि दावी गर्नु भयो जस्तै –बिर्कोट गाउँ देखि माथि उचुका देखि गजिङ्गको धुरीसम्म चालिसे टोल र बिर्कोट गाउँको सिमाना पानी ढलान साँध हुनुपर्दछ भन्ने मुखिया भक्तिराम र चालिसेटोला मुखियाले पानी ढलानभन्दा दक्षिणको खोल्सा हो भनि दावी गरेकोले बिर्कोटको जग्गा जमिन, जंगल चालिसे टोलाले हडप्न लागेको हुँदा बाग्लुङ्ग गौदा देखि मुद्वा काठमाण्डौ सम्म पुग्यो र काठमाडौंबाट पानी ढलान मुताविक भोग चलन गरि खानु भन्ने ईन्साफ भएछ । बिर्कोट मुखिया अन्तर्गत थाले पोखरामा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई चरणको सुविधा भयो । बिर्कोटको जीत भयो भक्तिराम (चामे मुखिया) काठमाडौं सम्म यात्रा गर्नु भएको थियो ।
दर्लामी मगर भएको समयमा रिख्मीको मुखियाले बिर्कोटको उत्तर पट्टीको वन कब्जा गरेकोमा मुखिया भक्तिरामले उजुर गरेर पछि सम्झौता गरी समाधान गरियो ।
बाग्लुङ्ग (गल्कोट) र गुल्मी जिल्लाको सिमानामा पनि विवाद भई रहने हुँदा मुखिया भक्तिराम बुढाथोकीको पहलमा राणा सरकारको प्रतिनिधि समक्ष सिन्धुरे पहराको बिच भाग नै दुई जिल्लाको सिमाना निर्धारण गरिएको थियो । र हाल सम्म यथावत छ । गाउँको चार किल्ला निर्धारित गर्न चामे मुखियाले अहं भुमिका खेल्नुभएको इतिहासले बताउँछ ।
बिर्कोट गाउको मुख्य धान हुने अमलावेदी फाँट (खेत) हो । यस फाँटको तिरो उठाउने जिम्मावाल खस गाउको खस क्षेत्री जिम्मावाल रहेछन् । वर्षमा आउने तिरो बुझ्ने गर्दथे, खेत बेचविखन गर्न पस्यो भने पनि खस गाउका जिम्मावाल समक्ष जानु पर्ने भएकाले जनतालाई असुविधा भएको व्यहोरा गल्कोट राजा भरतबम मल्ललाई, भक्तिराम बुढाथोकी मगर ज्यूले जाहेर गरे अनुसार पहिलाको जिम्मेवाललाई हटाई भक्तिरामका छोरा माईला तिल्क बहादुर बुढाथोकीलाई जिम्मावालको जिम्मेवारी दिनुभयो । भक्तिरामको चर्चित उपनाम थियो चामे मुखिया । माइला छोरा तिल्क बहादुरलाई जिम्मावाल दिलाउन चामे मुखियाको कुटनितिक खेलले मात्र सम्भव भएको थियो ।
बाईस खानी मुखियाहरु को सम्मेलन थियो र राणा सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधी पनि आएका थिए । बाइस खानी मुखियाको तर्फबाट भार्सेका मुखिया गंगा प्रसाद पुनले राणा सरकारको प्रतिनिधि समक्ष पहिला देखि बाइस खानी मुखियाहरुले राणा सरकारलाई तिरो वापत तामा धार्र्नी तिर्नु पथ्र्यो । तामाको धाउ सकिएको र खानी पनि संचालन नभएको हुँदा मन्दमली रुपियाँमा तिरो बुझाई पाउँ भनि निवेदन गरेछन् । तर चामे मुखिाले खानी संचालन नभएको हुँदा सरकारबाट तिरो मिनाहा गरिदिनको लागि थप निवेदन गर्नु भएछ । र पछि तिरो मिनाहा भएछ । पछि चामे मुखियाले गर्दा तिरो मिनाहमा परियो भनि, चामे मुखियाको प्रशंसा भएको थियो रे ।
मुखिया भक्तिराम (चामे मुखिया) फौजमा लेखपढ गर्न सिकेका हुँदा गाउँका युवाहरुलाई पढाउन पर्छ भन्ने मनसाय थियो । सायद त्यस ईलाकामा बिक्रम सम्बत २००८ साल तिर होला इन्डियन आर्मीबाट अवकाश प्राप्त हवल्दार पतिराम खत्रीलाई शिक्षक बनाई बिर्कोट गाउको साहु कविराम सलामी मगरको गोठमा प्रारम्भिक स्कुलको व्यवस्था गरी पठन पाठन सुरु गराउनु भयो । प्रत्येक विद्यार्थीले महिनाको रु १ माना चामल, दाल, घ्यू, नुन दिन पर्दथ्यो । गाउका भद्र भलाद्मीहरुलाई भेला गरी विसाउनामा ३/४ गाउको माझ पर्ने स्थानमा स्कुल भवन बनाई पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गाउमा भयो । निरन्तर अगाडी बढ्दै जाँदा अहिले कडिवासमा १०+२ हाई स्कुल संचालनमा छ । यसको श्रेय स्व. भक्तिराम ज्यू र त्यस समयको भद्र भलाद्मीलाई जान्छ । त्यो गोठमा पढ्ने विद्यार्थी मध्ये म यम बहादुर बुढाथोकी पनि एक हुँ ।
भक्तिराम/चामे मुखियाको देहान्त पछि मुखियाको जिम्मा कान्छा छोरा लाल बहादुर बुढाथोकीले सम्हाल्नु भयो र जिम्मावाल तिल्क बहादुर बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो । यो दुई भाईले स्कुल, स्वास्थ्य, चर्पि बनाउने, बाटो बनाउने र गाउँको चलन चल्ती अनुसार पञ्चायती व्यवस्था सुरु नहुन जेल सम्म गाउँको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जि. तिल्क बहादुर उप-प्रधान पञ्चको हैसियतमा काम गर्नुभयो । मु. लाल बहादुर जिल्ला सभासद् र बाग्लुङ्ग जिल्लाको जिल्ला पञ्चायत सदस्य निर्वाचित १५ वर्ष रहनु भयो ।
हालको बसोवास अवस्था
भुवन सिं बुढाथोकी मगरका सन्तान बिर्कोट गाउँमा बसोबास गरेको ८ पुस्ता भएको छ । पाल्पा छाडेको १६० वर्ष भन्दा बढी हुन सक्छ यकिन साथ भन्न सकिदैन । मुखिया भक्तिराम बुढाथोकी मगर जिवित हुँदा समेत पाल्पाली बुढाथोकी मगर संग आवत जावत थियो । वहाँको देहान्त पछि सम्पर्क विहिन भएको छ । बुढाथोकी परिवारको मूख्य बसोबास बिर्कोट हो, तापनि बसाई सराईको क्रममा बर्मा/बेलायतमा स्थायी बसोबास गरेका छन् । स्वदेशमा नेपालगञ्ज, काठमाडौं उपत्यकामा पनि स्थायी बसोबास गरेका छन् । जहाँ बसे तापनि मंसिर महिनाको पूर्णिमाको दिन कुलायनको पुजा गर्न सहभागी हुन्छन्, सहभागी हुन नसक्नेहरुले पुजाका सामानहरु पठाउने गर्दछन् ।
अन्तमा भुवन सीं बुढाथोकी मगरका सन्तानहरु समय अनुकुलता अनुसार राज्यलाई सहयोग गरेका छन् । राष्ट्रियता प्रति बफादार छन्, मिलनसार छन्, सहयोगी जनतालाई सहयोग सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई मूख्य आधार मानेर काम कर्तव्य निर्वाह गर्दछन् । सबै समुदाय संग एकताको भावना राख्द छन् । र भातृत्वको मूल आधारलाई स्वीकार्द छन् । शिक्षा प्रेमि र शिक्षाको विकासको लागि सधैं सहयोग गरिरहने भावना भएका सन्तानहरु हुन । बुढाथोकीका छोरी चेलीबेटीहरु पनि जहाँ गएर घरजम गरेर बसे तापनि माईतीहरुले जस्तै सबै पक्षमा सहयोगी भावना सहित काम गरि रहेका छन् ।
बुढाथोकी मगर (देउराली) भुवन सीं देखि ८ पुस्ता सम्मको वंसावली र पुस्ता सम्मको पारिवारिक परिचय र समय अनुसार राष्ट्रलाई सहयोग र आफु बसेको गाउँलाई व्यवस्थित गर्न सहयोगी भुमिका बारे संक्षिप्तमा यस पुस्तकमा प्रकाश पारिएको छ । कहीं कतै छुट हुन गएको भए जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।
बिर्कोट गाउँको बुढाथोकी मगरले पुख्र्यौली र जिम्मेवारी समाल्ने अवधि भर गाउँमा झै–झगडा भएमा गाउँकै भलादमीहरुले समाधान गर्नुहुन्थ्यो । बिर्कोट गाउँको जनता बिचको झै–झगडा गाउँ देखि माथिल्लो इकाईमा कहिल्यै पनि पुगेन । बरु अन्य गाउँका मुखियाहरुले उनका गाउँमा परेको झै–झगडा मिलाउन चामे मुखिायालाई आमन्त्रित गर्दथे । गल्कोट राजाले समेत चामे मुखियको कदर गर्नुहुन्थ्यो । बिर्कोट गाउँ शान्त समयानुकुल समृद्धि पनि थियो ।
मु. लाल बहादुर बुढाथोकी ज्यूले कडिबासको स्कुल जन जागृति मा.वि. को सिफारिस ल्याउनलाई धेरै हन्डर खाएर भएपनि स्विकृति दिलाउनु भएको थियो । जि. तिलक बहादुर ज्यूले स्थानिय स्तरमा स्कुलको लागि सहयोगी भूमिका निभाउनु भएको थियो । वहाँका छोराहरुले पनि बाबाहरुको कामलाई अनुसरण गर्दै स्कुलको लागि सहयोग गर्नु भएको थियो ।